Uyanda umkhuba wokubulalela eyomshwalense | Scrolla Izindaba
Uyanda umkhuba wokubulalela eyomshwalense
Buyanda ubugebengu bokukhwabanisa imali yomshwalense lapho kubulawa khona abantu, izigebengu ukuze zithole imali. Abantu abenza lo mkhuba isikhathi esiningi bakwenza kumalungu omndeni wabo mhlawumbe adla izidakamizwa, noma acwile etshwaleni noma ahlala emgwaqeni.
Lezi zigelekeqe zijwayele ukusebenzisa izinqubomgomo zomngcwabo njengekhava yomshwalensi njengoba kulula ukuyithola futhi ngesikhathi esifushane sokulinda uma umuntu eshone ngengozi ngokuvamile ikhokha phakathi kwamahora ambalwa.
Amapholisi amaningi akhokha imali ecela ku-R100,000 kanti abanye bomshwalense bakhokha kabili inzuzo yokushona ngengozi.
Lokhu kuvezwe ikomidi le-Forensics kwi-Association of Savings and Investment South Africa (i-ASISA) ngesikhathi likhipha izibalo zokukhwabanisa zanyakenye kuleli sonto.
Ezimweni eziningi ngemuva kwesikhathi esingaphansi kweminyaka emibili kukhishwe umshwalensi umuntu ushona ngezindlela ezingaqondakali abanye batholakala benamanxeba okugwazwa, ukudutshulwa noma isisulu sishayiswe imoto.
Njengoba abahlinzeki bomshwalensi beba nekhono ngokwengeziwe ekuhlonzeni ukukhwabanisa izigelekeqe seziqalile ukusebenzisa abagijimi ukuthi babathathele imishwalensi.
Izibalo ziveze ukuthi ukubulawa kwabantu ngenxa yomshwalensi kuyinkinga enkulu e-Eastern Cape. Kuphinde kwakhombisa ukuthi nyakenye ubugebengu obuhleliwe kwalabo ababandakanyeka emacaleni bangu-68 kwamacala angu-3,268 okukhwabanisa abandakanya imigomo yomngcwabo nyakenye.
Izinkampani zomshwalensi eNingizimu Afrika zathola izicelo zomgunyathi ezingu-4,287 ezibiza u-R787.6-million kuzo zonke izigaba zamabhizinisi asengozini nyakenye nokuwukukhula okukhulu ngaphezu kwezicelo ezingu-3,186 zenani lemali engu-R587.3-million ngo-2020.
Umgqugquzeli we-ASISA uMegan Govender uthe izigeleke seziyijwayele nemigomo nezinqubo zomshwalense.
“Lezi zigelekeqe zenza wonke amathuba okuxhaphaza futhi sekube nomkhuba okhulayo wabantu abashona ngendlela engaqondakali kule minyaka embalwa edlule,” kusho uGovender.
“Kwezinye izikhathi bayabulawa kwezinye bathola izidumbu zabampofu emakhazeni mhlawumbe umuntu osuke eshayiswe imoto.”
Ngonyaka odlule ikhava yomngcwabo yakhishwa kumama nendodakazi ngosuku ngaphambi kokuba badutshulwe esigangeni e-Eastern Cape.
“Owaziwa ngombulali womshwalensi uNomia Rosemary Ndlovu owayeyiphoyisa washaqisa abaningi ngesikhathi eboshwa etholakala enecala lokubulala umlingani wakhe namalungu omndeni amahlanu ukuze athole imali yomshwalense,” usho kanje.
NgoLwezi nyakenye uMfundisi uMelisizwe Monqo kanye nomkakhe uSiphosihle Pamba balahlwa icala bagqunywa ejele ngokuthatha u-R26.9 million wemigomo yempilo yamalungu ebandla ngenhloso yokubabulala. Baqashe inkabi ukuba ibulale ilungu lebandla.
UMoodley weluleka ngokuthi noma ubani osola ukuthi inqubomgomo yathathwa ngokungafanele yomshwalense kufanele athinte umeluleki wakhe futhi acele uhlu olusha lwemigomo ethathiwe ngomshwalense wakhe.